Maxkamada Sare ee Puntland oo Sii Daysay Iiraaniyiin Ku Xirnaa Xabsiga Bosaso [DAAWO] | SAHAN ONLINE
Maxkamada Sare ee Puntland oo Sii Daysay Iiraaniyiin Ku Xirnaa Xabsiga Bosaso [DAAWO]
BOOSAASO –Maxkamada Sare ee Puntland ayaa maanta sii daysan 17 Badmaax oo u dhashay wadanka Iiraan oo muddo 8 bilood ah ku xirnaa xabsiga dhexe ee Boosaaso. Sidoo kale Maxkamadu waxay xukuntay in dowladda Puntland la wareegto doonidii ay saarnaayeen oo ruqsad la’aan uga kalluumaysanayay xeebaha Puntland.
Dhagaysiga dacwada waxaa ka qaybgalay xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Puntland, Garsoorayaal ka socday maxkamada sare iyo Maxkamada derejada 1aad ee gobolka bari iyo dadweyne kale
Guddoomiyaha Ku-xigeenka Maxkamada Sare Nuur Ciise Maxamed ayaa ku dhawaaqay Go’aanka Maxkamada, waxaana uu sheegay in Maxkamadu ay burisay xukun hore ay Maxkamada rafcaanku gobolka bari ugu riday xukumaynayaasha Iiraaniyiinta ah.
Iiraaniyiinta la sii daayay ayaa la filayaa in ay dalkoodii dib ugu laabtaan
5tii bishii October ee 2017, ayaa ciidamada ilaalada xeebaha Puntland waxay gacanta ku dhigeen dooni iyo shaqaalaha Iiraaniyiinta oo si sharci darro ah uga kalluumaysanayay xeebaha Puntland. Howlgalkaasi waxaa ku dhintay kabtankii Markabka.